ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရစီမံခွင့်မြေကွက် ၅၀၀ကျော် ရောင်းချပေးမည် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်တချို့က အစိုးရစီမံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မြေတွေထဲက မြေကွက် ၅၀၀ ကျော်ကို လုပ်ငန်းသုံးနဲ့ လူနေထိုင်ဖို့တို့အတွက် ရောင်းချဖို့ စတင် စီစဉ်နေပါပြီ။ ဒီမြေတွေကို ရောင်းချမယ့်အကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ ၂ရက်မှာ ကြေညာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန စုပေါင်းရုံးမှာ ဒီကနေ့ လျှောက်လွှာတွေကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်ကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အခုလို ရောင်းချမယ့် မြေတွေဟာ ကျူးကျော်တွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ကြောင်း ဝေဖန်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုဇော်ထက်က ပေးပို့ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အရင်အစိုးရက သိမ်းထားခဲ့တဲ့မြေတွေလို့ သံသယရှိခံနေရတဲ့ မြေကွက်တွေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဦးဆောင်ပြီး စိစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလို ရောင်းချဖို့ အစီအစဉ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ဒီမြေကွက်တွေကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက ရောင်းချတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချ နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက မီဒီယာတွေကို ဒီနေ့ပြောလိုက်တာပါ။
“ရောင်းတာမှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီရောင်းတာသည် တဦးတယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် အာမခံချက်ရှိပါတယ်။”
မြို့သစ်တွေတည်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေ ဒီနေ့အချိန်အထိ လူနေအဆောက်အဦး အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘဲ ကျန်နေတဲ့ အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မြေတွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်ပြီး မြေယာလျော်ကြေးတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီမြေတွေကို ရောင်းချတာပါ။ အခုချိန်ထိ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက မြေယာလျော်ကြေး ကျပ်ငွေ ၆.၉ ဘီလီယံကျော် ပြန်ပေးထားပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘက်ဂျက်မှာ ကျပ်ငွေ ၃၁ ဘီလီယံလျော်ဖို့ လျာထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း စည်ပင်သာယာ အရာရှိတဦးက မီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။
“တဖက်ကလည်း ဒီမြေတွေကို တချိန်ကာလက လျော်ကြေးတစုံတရာ မပေးဘဲနဲ့ သိမ်းယူထားခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် တချို့လယ်သမားတွေက ပြန်ပြီးတော့ ရလိုကြောင်း တောင်းထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကျနော်တို့က ရန်ကုန်တိုင်းမှာ လယ်ယာမြေနဲ့ အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီကနေပြီးတော့ စိစစ်ထားတဲ့ အမှုတွဲပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မြေယာလျော်ကြေး ပေးတဲ့ဟာက ပြန်လည်ပြီးတော့ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပိုနေတဲ့မြေကွက်တွေကို ကျနော်တို့ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”
မြေကွက်တွေကတော့ ဒဂုံမြို့သစ် ၄မြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာနဲ့ မှော်ဘီ မြို့နယ်တွေက မြေဧက ၈၅. ၅၉၂ ဧကပေါ်က မြေကွက်ပေါင်း ၆၀၀ နီးပါးကိုရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတော့ ဒီကိစ္စအသေးစိတ်ကို လွှတ်တော်ပိုင်းက မသိရှိထားကြောင်း ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
မြေမရှိတဲ့သူတွေကို ရောင်းချတာမျိုးဖြစ်ရင် ဒီကိစ္စကိုထောက်ခံပေမဲ့ ဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်သလို ရန်ကုန်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ဥပဒေအရတော့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဘယ်လိုစီမံကိန်းမျိုးကိုပဲလုပ်လုပ် လွှတ်တော်ကိုတင်ပြပြီး လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှ လုပ်သင့်တာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသော်လည်းပဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လွဲမှားတယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်းနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော် နစ်နာမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် တခြားသော ဥပဒေတွေနဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ ငြိစွန်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။”
အခုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ လျှောက်လွှာထုတ်ရောင်းတဲ့ မြေကွက်တွေဟာ လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေမှာ ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေရှိနေကြောင်း မြေကွက်ဝယ်ယူဖို့ စုံစမ်းခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံက စက်မှုမြေကွက် ၂၀၀ နီးပါးကို ဖော်ထုတ်ဖို့ရှိပြီး တတိယအဆင့်အနေနဲ့ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းနဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းက မြေဧက ၉၃၀၀ မှာလူနေအိမ်နဲ့ စီးပွားရေးဇုံတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါက အရင်အစိုးရလက်ထက်က စံပြစိုက်ပျိုးရေးဇုံအတွက် ကုမ္ပဏီကြီး တချို့ကိုချပေးထားပေမဲ့ အကောင်အထည်မပေါ်တာကြောင့် ဒီထဲက ၈၀% ကို အစိုးရက ပြန်ယူဖို့ရှိကြောင်း ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း စည်ပင်သာယာ အရာရှိတဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြေကွက်အကျယ်တွေကတော့ ပေ ၄၀ x ၆၀ ကနေ ပေ ၁၀၀ x ၁၂၀ မြေကွက်တွေ ပါပါတယ်။ လျှောက်လွာတစောင်ကို တသောင်းကျပ်နဲ့ ရောင်းပေးနေပြီး လာလျှောက်တဲ့သူဦးရေက မျှော်လင့်ထားတာထက် အဆမတန်ပိုများနေတယ်လို့ ပြောနေတာလည်းရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကြီးက ပင်စင်စားတွေအတွက် မြေကွက်ချပေးမဲ့ကိစ္စကိုလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က လုပ်ခဲ့ပြီး တစောင်ကို တထောင်ကျပ်နဲ့ ရောင်းခဲ့တာမှာ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရုံးမှာ လျှောက်လွှာပေါင်း ၆၀၀ ကျော်လောက် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စ ကနေ့အချိန်ထိ ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးကြောင်းလည်း ရန်ကုန်မြေယာကိစ္စတွေကို စောင့်ကြည့်နေသူတွေက ပြောပါတယ်။
ရနျကုနျတိုငျး အစိုးရစီမံခှငျ့မွကှေကျ ၅၀၀ကြျော ရောငျးခပြေးမညျ
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး မွို့နယျတခြို့က အစိုးရစီမံပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ မွတှေထေဲက မွကှေကျ ၅၀၀ ကြျောကို လုပျငနျးသုံးနဲ့ လူနထေိုငျဖို့တို့အတှကျ ရောငျးခဖြို့ စတငျ စီစဉျနပေါပွီ။ ဒီမွတှေကေို ရောငျးခမြယျ့အကွောငျး ရနျကုနျတိုငျး အစိုးရအဖှဲ့က အောကျတိုဘာလ ၂ရကျမှာ ကွညောခဲ့ပွီး ရနျကုနျအရှပေို့ငျးခရိုငျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာန စုပေါငျးရုံးမှာ ဒီကနေ့ လြှောကျလှာတှကေို စတငျရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ ရနျကုနျတိုငျး လှတျတျောကို အသိပေးအကွောငျးကွားခွငျးမရှိဘဲ အခုလို ရောငျးခမြယျ့ မွတှေဟော ကြူးကြျောတှကွေောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှရှေိလာနိုငျကွောငျး ဝဖေနျနကွေတာလညျးရှိပါတယျ။ အပွညျ့အစုံကို ကိုဇျောထကျက ပေးပို့ထားပါတယျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး အရငျအစိုးရက သိမျးထားခဲ့တဲ့မွတှေလေို့ သံသယရှိခံနရေတဲ့ မွကှေကျတှကေို ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရက ဦးဆောငျပွီး စိစဈမှုတှေ ပွုလုပျပွီးတဲ့နောကျမှာ အခုလို ရောငျးခဖြို့ အစီအစဉျဖွဈလာခဲ့တာပါ။
ဒီမွကှေကျတှကေို ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရ မွစေီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီက ရောငျးခတြာဖွဈလို့ ယုံကွညျစိတျခြ နိုငျကွောငျး ရနျကုနျမွို့တျောဝနျ ဦးမောငျမောငျစိုးက မီဒီယာတှကေို ဒီနပွေ့ောလိုကျတာပါ။
“ရောငျးတာမှနျပါတယျ။ သို့သျောလညျး ဒီရောငျးတာသညျ တဦးတယောကျတညျးနဲ့မဟုတျပါဘူး အစိုးရအဖှဲ့အစညျးအနနေဲ့ ရောငျးတဲ့အတှကျကွောငျ့ အာမခံခကျြရှိပါတယျ။”
မွို့သဈတှတေညျခဲ့တဲ့အခြိနျကနေ ဒီနအေ့ခြိနျအထိ လူနအေဆောကျအဦး အကောငျအထညျမဖျောနိုငျဘဲ ကနျြနတေဲ့ အစိုးရစီမံခနျ့ခှဲပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ မွတှေကေို ပွနျဖျောထုတျပွီး မွယောလြျောကွေးတှပေေးနိုငျဖို့အတှကျ ဒီမွတှေကေို ရောငျးခတြာပါ။ အခုခြိနျထိ ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရက မွယောလြျောကွေး ကပျြငှေ ၆.၉ ဘီလီယံကြျော ပွနျပေးထားပွီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘကျဂကျြမှာ ကပျြငှေ ၃၁ ဘီလီယံလြျောဖို့ လြာထားကွောငျး ရနျကုနျတိုငျး စညျပငျသာယာ အရာရှိတဦးက မီဒီယာတှကေိုပွောပါတယျ။
“တဖကျကလညျး ဒီမွတှေကေို တခြိနျကာလက လြျောကွေးတစုံတရာ မပေးဘဲနဲ့ သိမျးယူထားခဲ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့ တခြို့လယျသမားတှကေ ပွနျပွီးတော့ ရလိုကွောငျး တောငျးထားတာ ရှိပါတယျ။ ဒါကိုလညျး ကနြျောတို့က ရနျကုနျတိုငျးမှာ လယျယာမွနေဲ့ အခွားမွမြေား သိမျးဆညျးခံရမှု ပွနျလညျစိစဈရေး ကျောမတီကနပွေီးတော့ စိစဈထားတဲ့ အမှုတှဲပေါငျး ၃၀၀၀ ကြျောရှိပါတယျ။ အဲဒီလို မွယောလြျောကွေး ပေးတဲ့ဟာက ပွနျလညျပွီးတော့ ရရှိနိုငျဖို့အတှကျ ပိုနတေဲ့မွကှေကျတှကေို ကနြျောတို့ ပွနျလညျရောငျးခခြွငျးဖွဈပါတယျ။”
မွကှေကျတှကေတော့ ဒဂုံမွို့သဈ ၄မွို့နယျ၊ လှိုငျသာယာ၊ ရှပွေညျသာနဲ့ မှျောဘီ မွို့နယျတှကေ မွဧေက ၈၅. ၅၉၂ ဧကပျေါက မွကှေကျပေါငျး ၆၀၀ နီးပါးကိုရောငျးထုတျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ရနျကုနျတိုငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျတဦးကတော့ ဒီကိစ်စအသေးစိတျကို လှတျတျောပိုငျးက မသိရှိထားကွောငျး ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
မွမေရှိတဲ့သူတှကေို ရောငျးခတြာမြိုးဖွဈရငျ ဒီကိစ်စကိုထောကျခံပမေဲ့ ဥပဒအေရ ရနျကုနျတိုငျးလှတျတျောရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့သာ ဆောငျရှကျသငျ့ကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးလှတျတျောကိုယျစားလှယျဟောငျးဖွဈသလို ရနျကုနျစောငျ့ကွညျ့အဖှဲ့ တညျထောငျသူလညျး ဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာညိုညိုသငျးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ဥပဒအေရတော့ တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့က ဘယျလိုစီမံကိနျးမြိုးကိုပဲလုပျလုပျ လှတျတျောကိုတငျပွပွီး လှတျတျောရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြရမှ လုပျသငျ့တာပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ ရညျရှယျခကျြကောငျးသျောလညျးပဲ လုပျထုံးလုပျနညျး လှဲမှားတယျဆိုရငျ တကယျတမျးနောကျပိုငျးမှာ နိုငျငံတျော နဈနာမှုတှဖွေဈတယျဆိုရငျ တခွားသော ဥပဒတှေနေဲ့ တညျဆဲဥပဒတှေနေဲ့ ငွိစှနျးတာတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျလေ။”
အခုရနျကုနျတိုငျးအစိုးရ လြှောကျလှာထုတျရောငျးတဲ့ မွကှေကျတှဟော လကျတှမွေ့ပွေငျအခွအေနမှော ကြူးကြျောနထေိုငျသူတှရှေိနကွေောငျး မွကှေကျဝယျယူဖို့ စုံစမျးခဲ့တဲ့ ရနျကုနျဒသေခံတဦးကပွောပါတယျ။
ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့ မွောငျးတကာစကျမှုဇုံက စကျမှုမွကှေကျ ၂၀၀ နီးပါးကို ဖျောထုတျဖို့ရှိပွီး တတိယအဆငျ့အနနေဲ့ ဒဂုံအရှပေို့ငျးနဲ့ ဒဂုံဆိပျကမျးက မွဧေက ၉၃၀၀ မှာလူနအေိမျနဲ့ စီးပှားရေးဇုံတှေ အကောငျအထညျဖျောဖို့ရှိပါတယျ။ ဒါက အရငျအစိုးရလကျထကျက စံပွစိုကျပြိုးရေးဇုံအတှကျ ကုမ်ပဏီကွီး တခြို့ကိုခပြေးထားပမေဲ့ အကောငျအထညျမပျေါတာကွောငျ့ ဒီထဲက ၈၀% ကို အစိုးရက ပွနျယူဖို့ရှိကွောငျး ဒီနသေ့တငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ရနျကုနျတိုငျး စညျပငျသာယာ အရာရှိတဦးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
မွကှေကျအကယျြတှကေတော့ ပေ ၄၀ x ၆၀ ကနေ ပေ ၁၀၀ x ၁၂၀ မွကှေကျတှေ ပါပါတယျ။ လြှောကျလှာတစောငျကို တသောငျးကပျြနဲ့ ရောငျးပေးနပွေီး လာလြှောကျတဲ့သူဦးရကေ မေြျှာလငျ့ထားတာထကျ အဆမတနျပိုမြားနတေယျလို့ ပွောနတောလညျးရှိပါတယျ။
ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရကွီးက ပငျစငျစားတှအေတှကျ မွကှေကျခပြေးမဲ့ကိစ်စကိုလညျး လှနျခဲ့တဲ့ သုံးနှဈလောကျက လုပျခဲ့ပွီး တစောငျကို တထောငျကပျြနဲ့ ရောငျးခဲ့တာမှာ ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရရုံးမှာ လြှောကျလှာပေါငျး ၆၀၀ ကြျောလောကျ ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စ ကနအေ့ခြိနျထိ ဘာဖွဈသှားတယျဆိုတဲ့ နောကျဆကျတှဲ အခွအေနတှေကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မသိရသေးကွောငျးလညျး ရနျကုနျမွယောကိစ်စတှကေို စောငျ့ကွညျ့နသေူတှကေ ပွောပါတယျ။